सगरमाथा इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन २ अर्बभन्दा बढी
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आव २०७५/०७६ को अन्तिम त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानि गरेको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. २ अर्ब १७ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. १ अर्ब ८३ करोड आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा...
१२१६.११ विन्दुमा नेप्से परिसूचक (१ बजेको अपडेट)
भदौ २, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा ५ दशमलव ९६ अंक घटेर १ हजार २१६ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २२२ दशमलव शून्य ९ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत घटेको हो । सोमवार दोस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १३९ कम्पनीको रू...
पाँचथर पावर ७ करोडभन्दा बढी घाटामा
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । गत आव २०७५/७६ सम्म पाँचथर पावर कम्पनी रू. ७ करोड ८६ लाख ४७ हजार घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आव २०७४÷७५ मा रू. ५ करोड ७२ लाख ९६ हजार घाटा व्यहोरेको कम्पनीले गत वर्ष यो रकम अझ बढाएको छ । गत वर्ष कम्पनीले रू. २४ करोड ९९ लाख ९ हजार सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो रकम अघिल्ल...
नागरिक लघुवित्तले उठायो ११ लाख २९ हजार खराब कर्जा
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । नागरिक लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्थाले आव २०७५/०७६ को वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेको छ । कम्पनीले सो आवमा रू. ११ लाख २९ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको छ । कम्पनीले रू. ९० लाख २२ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको ५४ लाख ३६ हजार सञ्चालनमा नोक्सान भएपछि रू. ४३ लाख घाटा भएक...
एभरेष्ट बैंकको १० वर्ष पुरानो लाभांश लिन आएनन् शेयरधनी
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । एभरेष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सालदेखिको लाभांश लिन शेयरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । बैंकले सूचना जारी गरी उक्त लाभांश भुक्तानी लिन शेयरधनीहरुलाई आग्रह गरेको हो । लाभांश लिनका लागि शेयरप्रमाणपत्र र परिचयपत्र लिई बैंकको शेयर शाखामा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
एक घण्टामा ४.९२ अंकले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको पहिलो एक घण्टामा ४ दशमलव ९२ अंक घटेर १ हजार २१७ दशमलव १४ विन्दुमा पुगेको छ । गत कारोबार दिन बढेर बन्द भएको परिसूचक यस दिनको पहिलो घण्टामा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत घटेको हो । यस अवधिसम्म कारोबारमा आएका १०५ कम्पनीको २ करोड ६१ लाख बराबरको शेयर क...
एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्डको बुक क्लोज
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । एन्आइसी एशिया म्यचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड को इकाईधनी दर्ता पुस्तिका भदौ १३ गते एक दिन बन्द हुने भएको छ । योजनाले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । योजनाको भदौ १२ गतेसम्म कायम रहेका इकाईधनीहरुले नगद लाभां...
नेप्सेमा नेको इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । नेप्समा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले १२ प्रतिशत बोनस शेयरको सामायोजन पछि मूल्य रू. ४०३ दशमलव ५७ तोकेको छ ।
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ को इकाईमा आवेदन दिने बिहीवार अन्तिम दिन
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ म्युचल फण्डद्वारा सञ्चालित सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम २ को इकाइमा आवेदन दिने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ । योजनाले साउन २३ गतेदेखि १४ करोड इकाई विक्रिमा ल्याएको हो । योजनाको इकाईमा आवेदन दिने ढिलो अवधि भदौ २० गतेसम्म रहेपनि खरीदका लागि इकाई संख्...
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको हकप्रदको निष्कासन तथा विक्रि खुला
भदौ ३, काठमाडौं (अस) । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले हकप्रद शेयरको विक्रि खुला भएको छ । कम्पनीको हकप्रदमा मंगलवार (आज)देखि आवेदन दिन सकिन्छ । कम्पनीले ७२ लाख ५७ हजार ६०० कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले साउन १३ गतेसम्मका कायम शेयरधनीहरुलाई १ बराबर २ दशमलव ४ क...